Minisiteran’ny Asa sy Cnaps: natsangana ny « Task Force » | NewsMada
Minisiteran’ny Asa sy Cnaps: natsangana ny « Task Force »
Hiara-kiasa ny minisiteran’ny Asa sy asam- panjakana ary ny lalàna sosialy (MTFPLS) ary ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps), hanatanterahana ny toromarika tinapaka tamin’ny filankevitry ny minisitra, ny 3 mey farany teo. Votoatiny ny hanentanana ny orinasa sy ny mpampiasa hanatanterahan’izy ireo ny adidiny amin’ny fiahiana sosialy ny mpiasa ato anatin’ny telo volana. Hanatanteraraha izany, natsangan’ny roa tonta ny vaomiera manokana iraisana, « Task force », handrindra ny paikady ilaina rehetra. Miisa 10 ny mpikambana ao aminy, ka dimy avy amin’ny andaniny (minisitera) sy ny ankilany (Cnaps).
Nambaran’ny tale jeneralin’ny minisitera MTFPLS, fa zava-dehibe ity fiaraha-miasa ity satria tanjona ny hisian’ny « asa mendrika ho an’ny rehetra ».
Vitsy ny mpiasa misitraka ny zony
Ho an-dRtoa Tsaboto Joslina, tale jeneraly mpisolo toerana ao amin’ny Cnaps, ilaina ity fiaraha-miasa ity satria tsapa fa mbola ambany ny mpiasa misitraka ny fiahiana sosialy eto amintsika. Araka ny antontanisan’ny Cnaps, ny 16.000 amin’ny 43.000 voarainy lisitra ihany ny mpiasa manana fiahiana sosialy.
Araka ny voalaza etsy ambony, haharitra telo volana ny fanentanana. Hiaraka hidina ifotony ny sampandraharaham-paritry ny minisitera sy ny masoivohon’ny Cnaps manerana ny Nosy. Fantatra fa hisy ny tomban’ezaka ataon’ny “Task force” aorian’io fe-potoana io, ary hitohy hatramin’ny faran’ny taona ny asa. Misy ny lalàna ary ilaina ny fampiharana azy.
Tsiahivina fa vonona koa ny fanjakana, hiara-kiasa amin’ny Cnaps, hikarakarana ny mpiasa tena (mpisolo vava, dokotera, …), ny tantsaha, ny mpanjono, ny mpanao asa tanana, sns. Hojerena manokana koa ny sehatry ny fitateram-bahoaka, satria tsy mbola mahazo ny zony ny mpamily sy ny mpanampy azy, sy ny mpiasa hafa.